Tsy ny fiverenan-dRavalomanana no olana fa ny matahotra azy no mametraka olana. – MyDago.com aime Madagascar
Tsy ny fiverenan-dRavalomanana no olana fa ny matahotra azy no mametraka olana.
Toy izao indray ny tatitry ny kabary heno tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka, androany 05 Septambra 2011.
Fred (association) :tantsaha izay 80% ny malagasy no marary noho ny krizy. Tsy ampy hoy zareo ny communication ka dia teneno mialoha izahay rehefa ho avy i Dada fa hotonga izahay.
Ramarokoto (fitarikandro) : tsy manana politika mazava ny FAT fa manaraka ny baikon’ny frantsay fotsiny. Tsy hitondra fampandrosoana ny mpandraharahatonga eto fa dia handroba fotsiny.
Ity krizy ity tsy resaka Andry sy Ravalomanana miady ihany ka mety mihitsy raha tsy mampangina ny vahoaka satria Ravalomanana niaro ny tanindrazany ka rehefa lasa izy dia ny vahoaka no niaro ny taniny amin’ny mpanongam-panjakana.
Sarobidy ary saropady ny fifidianana ka tsy azo hatao peta-toko sady raha raharahan’adala ny toy izao, na ny eto an-toerana na ny any ivelany tsy hanaiky izay vokatra eo. Tsy ilaina propangandy intsony ny fifidianana any i Ravalomanana fa efa ampon’ny olona.
Ronstant :ny tenenitsika eto ihany no marina, rehefa niteny isika fa ho avy ny Troika dia efa manangansanga izany. Raha tena maika tokoa ianareo hanao sonia dia hataovy rahampitson’ny hatongavan’ny Troika.
Io fihaonana io dia hisy ny “présence conjointe” no hitranga eo satria tsy mahatoky ny fanelenelanana mozambikana ny Sadc.
Zafimbelo :any Atsimo Atsinanana dia tsy misy fahefana FAT intsony, tsy eken’ny vahoaka ny chef de région fa ny chef de district no resahan’ny vahoaka ka dia niakatra ao Farafangana ny mpanjaka.
Rodin : vola tokoa no miasa ka mbola misy filazam-baovao mbola mamitam-bahoaka ihany. Fotoana hampisehoana ny herin’ny ankolafy 3 sy ny rodobe amin’ny herinandro. Hahita mivantana ireo Troika ireo. Aza i Dada tokoa no atahorana fa ny zanany masiaka.
Zafilahy : iza no milaza ny marina ? Tamin’ny volana jolay i Andry no nilaza fa ho avy ny Sadc amin’ny volana ambony hampanao sonia. Ravalomanana anefa nilaza fa mbola tsy izao fa miakina amin’ny Sadc. Ny marina dia hainy iry O,O,O mihitsy no milalao ny FAT ka dia nirotsaka foana ny kitapo. Milaza tsy mila fankatoavina nefa miandradra mafy. Fomba faniliana any iry O,O,O io fandraisan’ny Troika ny raharaha io, na ny fomba fiteny io na ny fomba fanao ara-pomba diplomatika ka nanomboaka nikorapaka i Andry, mihavitsy ny olona mahatoky azy ary tsy nahavotra azy ny fanambarany. Ka ho hita eto raha tsy hiandry i Andry ary mananfaingana ny tantarany izay hataony .Ny 11 septambra notonga ny teknisiana ary 14, 15, 16 rehefa milamina ny zavatra rehetra dia mizotra any Ivato isika fa tsy any Nosy Be izany. Efa nanambara koa ny tany goavana fa tsy izy ny FAT ka mila mitovy amin’ny hetsika sabotsy ny andro rehetra amin’ny herinandro, tandremo anefa fa rehefa manao zavatra iray tsy mety ny zanany dia any amin’ny Dadany no mianjera ny rihitra. Mora tokoa ny maka fahefana fa ny mampihatra sy mitazona azy no sarotra.
Mektoub : ny tody kokoa tsy misy fa ny atao no miverina. Mialoha ny rongopohy tany Ivato ireny dia nilaza ny HPM izay nisitaka fa tsy misy HPM intsony miaraka amin’ny ankolafy Zafy, izao anefa ry zareo mipatitaka tanteraka.
Aoka hazava amin’ny rehetra fa tsy ny fiverenan’i Ravalomanana no olana fa ny matahotra azy no mametraka olana. Tolon-tanana maloto no atolotr’i Voninahitsy, kajikajy ireny satria tsy afaka sakana intsony ny fiverenan’ireo filoha nefa Rajoelina tsy avela koa.
Antomboka any Toamasina ny fananganana ny olona rehetra hazon’ny trindry hazolena amin’ny fibodon’ny FATn’ny taniny toy ny Magro.
Eto amin’ity tany ity dia misy mihitsy ny vao teraka dia mpamadika, ho avy tokoa ny famaranana ny krizy ka dia misahotaka ny FAT. Efa olona naloto hatry ny ela tao anatin’ny tontolon’ny fanantanjahantena i Ndremanjara Jean André. Tsy ory hava-manana isika fa rehefa manakarena amin’ny volam-bahoaka kosa dia tsy ekena. Toy ny masoanadro ririnina ny FAT ka kely sisa no hanana azy. Ho TGV tokoa inao ry Lanto Rakotomavo rehefa hanolotra ny paikadiny izy telolahy. Ianao manao “manœuvre dilatoire”, manambitamby sy “mi-manipuler opinion publique” io ho volom-boasary ianao. Hoatrany efa miova ny fiteninao, mandaka an’i Andry sahady ve ? Manamboatra toerana ?Manakaiky “autres sensibilities” ve satry tsy hisy Andry ao anatin’ilay tetezamita tena izy? Na ivadika inona na inona ireo, tsy mety amintsika ny miaraka amin’ireo ary tsy mahatavory olona intsony ny FAT raha tsy maka mpanakanto maro malaza. Tandremo anefa fa mbola maro ny tsy manjary ao anatin’ny ankolafy 3.
I Andry irery sisa no mbola miseho milay misangisangy amin’i Zuma fa izao tontolo izao mahalala fa matanjaka izany Afrika Atsimo. Nila nisafidy mantsy i Sarkozy t amin’ny voalohany na demokrasia na tombontsoa. Ho hampisehon’ i Zuma fa ankoatra ny iraka, ny ministra dia ho avy izy ary enga anie miaraka amin’ny filoha 2 lahy.
Hamaha krizy ny fiverenan-dRavalomanana eto.
Matahotra CPI dia nitsoaka i Andry Rajoelina?
Auteur Solo Razafy*Publié le 5 septembre 2011 5 septembre 2011 Catégories Politique
Précédent Article précédent : GMMR : « Groupement Mpamadika an’i Marc Ravalomanana »
Suivant Article suivant : Mamalan-kira hatrany ny Frantsay !